Daawo: Dabaal-degyadii Balaadhnaa ee Ka dhacay Muqdisho iyo Kismaayo iyo Ciidanka Qalabka sida oo ka qayb galay - Hablaha Media Network
Daawo: Dabaal-degyadii Balaadhnaa ee Ka dhacay Muqdisho iyo Kismaayo iyo Ciidanka Qalabka sida oo ka qayb galay
HMN:- Waxaa inta badan Dalka Soomaaliya Xalay iyo maanta ka socda Daabaal degii ugu Balaadhnaa kaasi oo lagu soo dhowaynayo Madaxwaynaha Cusub ee Dawlada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Kumanaan kamid ah Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa Xalay isaga kala yimid Xaafadaha kala duwan ee magaalada, Iyagoo muujinaya Taageerada Balaadhan ee ay u Hayaan Madaxwaynaha Cusub ee la doortay.
Shacabka oo Dareenkooda muujinaya ayaa sheegay inay Aad ugu Faraxsanyihiin Guusha uu gaadhay Farmaajo, oo kadhigan mid uu gaadhay Shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubadda Hoose ayaa waxaa ka dhacay Munaasibad Balaadhan oo loogu dabaal degayo Madaxwaynaha Cusub ee Soomaaliya.
Sidoo kale Qaybo kamid ah dalalka Caalamka ee Soomaalidu ay ku sugan tahay ayaa waxaa ka Socda Dabaal-degyo Balaadhan oo lagu soo dhowaynayo Madaxwayne Farmaajo.